Petit pois a la française (kana French pizi) | Kicheni Mapepa
Dunya Santiago | | Shamwari, Mapinda Anopisa, General, Kudya, Kurutivi Dish Recipes, Vegetable Recipes, Chiedza mabikirwo, Mapepa ane hutano, Nyore Mapepa
ari peas Ivo chikamu chezvikafu izvo zvatinowanzo kanganwa mumakicheni edu uye, kana zvikaonekwa mazviri, vanozviita nenzira isinganzwisisike (yakavanzwa mupunga, semuenzaniso). Nhasi ndafunga kuenda kunonunura mapizi nerubatsiro rwe nzira yekubheka iyo inouya kwatiri ichibva France, zviri nyore kwazvo kuita uye zvakanyanya mari.
Dhigirii rakaoma: Zviri nyore kwazvo
Nguva yekugadzirira: 20 maminitsi
Zviratidzo zvevanhu 4:
Hafu yekilo ye peas (nyowani kana chando, sezvaunoda. Kana zviri zvitsva zvinotora nguva yakareba kuti zviitwe)
1 onion zvishoma
Mazino maviri e garlic
1 tablespoon ye mafuta omuorivhi
* Kwangu anga ari matsva, asi ini ndakange ndamboabikira uye kuachengeta mufiriji.
Muchopu isa mvura nediki Sal uye, painotanga kubika, wedzera iyo peas. Kana dzave nyoro, bvisa kubva pamoto uye uzviise kudrain.
Muhomwe isa chipunu che mafuta omuorivhi, wedzera iyo onion julienned, iyo clove yegariki cheka muzvimedu uye rega zvese zvinyike. Kana hanyanisi yangove pachena, wedzera iyo peas, kota girazi remvura, iyo Mhiripiri, el shuga uye siya pamusoro wepakati kupisa kusvikira muto uchinge waderera (gadziridza munyu kana zvichidikanwa).
Uye voila, iwe uchitova neyako French pizi kugadzirira kunakidzwa.
Kana zvasvika pakushumira ...
Ndapedza iyo French kubata of the nzira yekubheka kushandira pizi ne yai poche pakati, asi muchokwadi iwo echinyakare kushongedzwa kwenyama chena.
Chekutanga rangarira kuti kunyangwe iwe uri dhayeti pane chikafu chausingafanire kubvisa zvachose. Kunze kwekunge uine dambudziko rehutano uye chiremba wako akakuudza neimwe nzira, unogona kudya mazai mukuenzanisa (kwete anopfuura matatu pavhiki) kana mafuta omuorivhi, iyo inobatsira utano, asi zvakare zvine mwero (2 kana 3 mashupuni pazuva zvakakwana).
Iyo yekubheka 100% yepakutanga y french french takurawo lettuce cheka kuita zvidimbu (yakabikwa padivi peizi) uye chipunu che Ruomba (akawedzera asati ashumira).
Ini ndaigona kupa zano kuwedzera karoti, broccoli, nezvimwe kuitira kuti iyo shongedza izere zvakakwana, asi ipapo ndingadai ndisisiri kutaura nezve iyo chinyakare mabikirwo, asi nezvekugadzirwa kwangu izvo chokwadi wakasununguka kuyedza kana uchida.
Kana iwe uri kutsvaga mwana kana iwe uri mune yako yekutanga trimester yekuzvitakura, iyi yekubheka inogona kubatsira zvakanyanya. Iyo peas chikafu chakakosha mumatanho aya nekuda kwehukuru hwavo hwe folic acid, iyo inovandudza kubereka uye inobatsira iyo fetus kukura.
Bon Chido! Nakidzwa neresipi uye uve neSvondo rinofadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Petit pois a la française (kana French peas)
Zvakanaka, ini ndanga ndisingazive iyi chidiki chidiki cheFrance uye kuti mukomana wangu chiFrench! oo kunyarara kwaanga akaita! nekuti ivo vanofanirwa kuve vanonaka kwazvo, ini ndinoda mapea saizvozvowo, senzira yekutanga, ndinovada! anofara
Zvakanaka, muudze kuti arege aende kuti muFrance mune zvakawanda kupfuura crêps uye croissants! Hahaha. Hei, pamwe ndanga ndichida kukushamisa ... :)
Kwazisai, mon amour!
Apple zvivakwa (uye Smoothie kutora mukana wavo)